Ciidamada Xasilinta Oo Dib Loogu Soo Celiyay Baraha Kontorool Ee Muqdisho!
Monday May 14, 2018 - 12:38:18 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Warar ay helnay ayaa waxa ay sheegayaan in Isgoysyada wadada wadnaha ee Magaalada Muqdisho dib loogu soo celiyay ciidamadii xasilinta ee ka shaqeynayay baaritaanka gaadiidka u gudba dhanka wadada Maka Al-Mukarama.
Qaar ka tirsan shacabka Muqdisho ayaa inoo sheegay in Ciidamada xasilinta ay gaadiidka ku baarayaan Baraha Koontarool ee Isgosyada ah oo markii horeba ay joogi jireen, laakiin muddooyinkan dambe laga qaaday.
Meelaha lagu arkay ciidamada xasilinta ee Gaadiidka ay ku baarayaan ayaa waxaa ka mid ah Isgoyska Hawlwadaag, Isgoyska Foloransa iyo Isgoysyada kale ee ka agdhaw halkaasi illaa Isgoyska Darjiinka oo gaadiidka ay ku baarayaan.
Ciidanka xasilinta ayaa horey looga qaaday baraha kontorool ee gudaha magaalada, kadib markii qaraxyo lala beegsaday dhawr baro ciidan oo ay ku sugnaayeen kuwa xasilinta.
Qorshahan dib u soo celinta ciidanka xasilinta ayaa la sheegay in dowladda Soomaaliya ay uga gol leedahay in ammaanka la xaqiijiyo inta lagu guda jiro Bisha Barakeysan ee Ramadaan.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa qaba fikirka ah in ururka Al-shabaab ay kordhiyaan weerarada ay ka geysanayaan dalka marka la gaaro bisha Ramadaan, sidaasi darteed dowladda maalmo kahor waxay sheegtay in ay diyaarisay ciidamo suga ammaanka Muqdisho, inta lagu guda jiro bisha Ramadaan.